Leicester City vs. Arsenal - Warbixinta cayaaraha kubbadda cagta - 9 Noofambar 2019 - ESPN - Waxay sheegtaa xiriirka
ACCUEIL » SPORTS Leicester City vs. Arsenal - Warbixinta cayaaraha kubbadda cagta - 9 November 2019 - ESPN
Leicester City vs. Arsenal - Warbixinta cayaaraha kubbadda cagta - 9 November 2019 - ESPN
Jamie Vardy et James Maddison wuxuu dhaliyay goolal qeybtii labaad markii Leicester City ay garaacday Arsenal 2-0 cajiib ah sabtidii si ay ugu gudubto kaalinta labaad ee Premier League. 19659002] Leicester waxay leedahay dhibco ah 26 iyo goolal ay ku hogaamineyso Chelsea iyo hal dhibic oo ah kooxda heysata Manchester City, kuwaasoo booqda hogaamiyaasha Liverpool axada.
Gunners ayaa ciyaartay afar kulan oo aan wax guul ah gaarin horyaalka, guuldaradii ugu dambeysay waxaa lagu dari doonaa su’aalaha la weydiiyay ee ku saabsan go'aankooda ku aadan inuu bedelo macalinka reer Spain Unai Emery.
Waxay ahayd qeyb dheellitiran qeybta hore, in kasta oo koontarool la'aanta Arsenal ay inta badan siineysay fursado Leicester.
Kooxda Leicester kooxdani waxay sidoo kale barteen fuulitaanka ciyaartooyadooda wixii ka dambeeyay dhexda, waana tan mar kale kiiskii ka dhanka ahaa Gunners.
Arsenal ayaa dadaal ku bixisay daqiiqaddii 55e ee kana yimid Pierre-Emerick Aubameyang xukumay. Ka baxsan dib u eegista VAR iyo 13 daqiiqado ka dib, Leicester ayaa garaacday goolka.
Vardy wuxuu soo saaray gooldhaliye dabeecad ah, kalsooni markii ugu horeysay, isagoo ka yimid gudaha ciyaarta ka dib baas fiican oo uu galay qolka labiska ee kooxda kalsoonida Leicester, isagoo si cad uga faa'ideystay kubadiisa intii uu joogay Brendan Rodgers.
Goolka ayaa ahaa kulankii sagaalaad ee Vardy ee uu ka horyimaado Arsenal waxaana uu ku dhawaaday inuu u dhawaado kii labaad daqiiqaddii 72e, laakiin darbadiisa hoose ayaa xannibtay. Bernd Leno .
Saddex daqiiqo ka dib, Vardy wuxuu noqday iibiyaha Foxes markii labaad, isagoo dib ugu diray kubaddii Maddison oo darbadiisa hoose ay ka dhacday Leno.
Rodgers ayaa si dhakhso leh u kiraystay Vardy, oo ah gooldhaliyaha ugu sareeya Premier League isagoo dhaliyay gooldhalinta 11 ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan.
Waxaas oo dhan waa inaan siino kalsooni. Waxa uu ka mid yahay kuwa gooldhalinta ugu fiican kubbada cagta Yurub waxa uu u keeno koox, cadaadiskiisa, ”ayuu yiri tababarihii hore ee Liverpool Celtic.
Waxaan u ogolaanay inuu gabi ahaanba sameeyo waxa uu doonayo. inaan sameyno - sida aan u ciyaarno, inaan u dagaallanno oo aan u ciyaarno si dhaqso leh ayaa fiican. Laakiin awoodiisa uu ku dhammeysto, sida ay u caafimaad tahay, gabi ahaanba waa ifafaale. Tani waxay muujineysaa wax badan oo feejignaantiisa. Markay jiraan fursado, had iyo jeer waa diyaar. "
Emery wuxuu sheegay in kooxdiisu ay soo bandhigtay hay'ad difaac oo ka wanaagsan, laakiin ay aqbaleen dadka su’aal ka keenay shaqadiisa kooxda.
Waxaan la hadlayaa kooxda si aan u sii ahaado mid xoogan oo aan kasoo kabsado. Waxaan sidoo kale haysannaa ciyaartoy da ’yarta ah oo ila soo koraya,” ayuu yiri.
Waan ogahay inaan helno dhaleeceyn, laakiin horaan u sameeyay waanan ka soo kabsaday. Waan aqbalayaa dhaleeceynta oo dhan. Waa caadi. Maanta, waxaan qaadnay talaabo hore markii aan ku fiicneyn daafaca, ”ayuu raaciyay macalinka reer Spain.
Waa inaan dib u helnaa kalsoonidii. Waa inaan dulqaadnaa duruufaha qaar waana sameyn doonnaa. "
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/report?gameId=541725
Gladbach ayaa sii kordhiyay hogaankiisa Bundesliga ka dib abaalmarin uu siiyay Enke
Microsoft dévoile chaque nouveau jeu Xbox One sur X019 – BGR